အမှားလုပျမိတဲ့ ဝနျထမျးတှကေို အလုပျထုတျခွငျးမလုပျဖို့ အကွံပွုလာတဲ့ Twilio ကုမ်ပဏီ CEO – SoShwe
Home/LifeStyle/အမှားလုပျမိတဲ့ ဝနျထမျးတှကေို အလုပျထုတျခွငျးမလုပျဖို့ အကွံပွုလာတဲ့ Twilio ကုမ်ပဏီ CEO
So Shwe May 18, 2022	LifeStyle, Tech Leaveacomment
ကြှနျမတို့ မှာယူထားတဲ့ အစားအသောကျတှကေို လာပို့ပေးနပွေီဖွဈကွောငျးနဲ့ ကွိုတငျချေါယူထားတဲ့ Uber အငှားယာဉျက အိမျရှကေို့ ရောကျနပွေီဖွဈကွောငျး အသိပေးနတေဲ့ စာတိုလေးတှေ ဖုနျးမကျြနှာပွငျပျေါ တကျလာရငျ အတျောလေးကို ပြျောစရာကောငျးပါတယျ။ ဒီပြျောရှငျမှုတှကေို ဖနျတီးပေးနတောကတော့ ကမ်ဘာကြျော နညျးပညာကုမ်ပဏီကွီး Twilio ပဲ ဖွဈပါတယျ။
Twilio ကုမ်ပဏီကို၂၀၀၈ ခုနှဈမှာ စတငျတညျထောငျခဲ့ပွီး အခုခြိနျမှာတော့ ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာ ကုမ်ပဏီခှဲပေါငျး (၂၄၀,၀၀၀) ထိတောငျ ရှိနပွေီလညျးဖွဈပါတယျ။ Twilio ရဲ့ နှဈစဉျရောငျးအားဟာ ဒျေါလာ (၂.၅ ဘီလီယံ) အထိရှိတဲ့အပွငျ ကုမ်ပဏီရဲ့ အကွီးမားဆုံးသော ဖောကျသညျတှကေတော့ Deliveroo နဲ့ Uber ပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ Uber က Twilio ကုမ်ပဏီရဲ့ ဝနျဆောငျမှုအသုံးပွုနှုနျးကို လြှော့ခခြဲ့တာကွောငျ့ ကုမ်ပဏီအခွအေနဟော အကပျြအတညျးတှနေဲ့ ကွုံတှခေဲ့ရပါတယျ။ Mr Lawson ဟာ CEO တဈယောကျအနနေဲ့ အဆိုပါအခွအေနကေို ကွုံတှလေ့ာရတဲ့အခါမှာ မထငျမှတျထားတဲ့ လဈဟာမှုတှကေို မွငျသှားခဲ့တာကွောငျ့ ကုမ်ပဏီရဲ့ အဓိကပွဿနာအတှကျ အဖွထေုတျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
Mr Lawson က “ဒါဟာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှအေတှကျ အရေးပါတဲ့အခကျြတဈခကျြပါ။ ဒီပွဿနာကို ကွုံတှရေ့တဲ့အခြိနျမှာ ကြှနျတျောတို့ကုမ်ပဏီရဲ့ ရှယျယာတှဟော တဈနတေ့ညျးမှာပဲ ၄၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျ ကဆြငျးသှားခဲ့ပါတယျ။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
Mr Lawson က Uber ကို Twilio ရဲ့ ဝနျဆောငျမှုတှေ ဆကျလကျအသုံးပွုဖို့ ဆှဲဆောငျနိုငျခဲ့ခွငျးမရှိတဲ့ ဝနျထမျးတှကေို အပွဈတငျဖို့ စီစဉျခဲ့ပမေယျ့ ဝနျထမျးတှကေို အပွဈမတငျခငျမှာ ကုမ်ပဏီရဲ့စနဈကပဲ မှားယှငျးနတောလား? ဝနျထမျးတှကေပဲ တဈလှဲတှလေုပျနတောလားဆိုတာကို ပွနျလညျဆနျးစဈ လလေ့ာခဲ့ပါတယျ။
Mr Lawson က “တကယျ့ ပွဿနာအစဈအမှနျက ကြှနျတျောတို့မှာ အရောငျးဝနျထမျး လုံလုံလောကျလောကျ မရှိခဲ့တာပဲ။ အခြိနျတိုအတှငျးမှာ Uber ကို အသုံးပွုသူတှေ အမြားအပွား ရှိလာခဲ့တာကွောငျ့ အရောငျးဝနျထမျးတှကေ ဝယျယူသူတှကေို ကောငျးမှနျပွညျ့စုံတဲ့ ဝနျဆောငျမှုမြိုးပေးဖို့ လုံလောကျတဲ့ အခြိနျပမာဏလညျး မရခဲ့ကွဘူး။” ဆိုပွီး ပွဿနာရဲ့ အရငျးအမွဈကို မြှဝပွေောပွခဲ့ပါတယျ။
ဆကျလကျပွီးတော့ Mr Lawson က “အကယျ၍ ကြှနျတျောတို့မှာ အရောငျးဝနျထမျး အမြားအပွား ရှိခဲ့မယျဆိုရငျ Uber နဲ့ ပိုမိုဆကျသှယျနိုငျမှာဖွဈပွီး သူတို့ရဲ့ ပွဿနာတှကေို ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဝနျဆောငျမှုတှနေဲ့ ဖွရှေငျးပေးနိုငျခဲ့မှာပေါ့။ Uber အနနေဲ့လညျး အရညျအခငျြး ပွညျ့ဝတဲ့ စာရငျးကိုငျမနျနဂြောတဈယောကျ ထားသငျ့ပါတယျ။” လို့ ဆိုပါတယျ။
Mr Lawson က အရောငျးဝနျထမျးတှကေို အလုပျထုတျပဈမယျ့အစား ဝနျထမျးတှအေနနေဲ့ မနိုငျဝနျ ထမျးနတောမြိုး မဖွဈရအောငျ အရောငျးဝနျထမျးအသဈတှေ ချေါယူခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ ဖွဈရပျပွီးတဲ့အခြိနျကနစေပွီး Twilio ကုမ်ပဏီဟာ အရငျကထကျ (၅) ဆ ပိုတိုးတကျလာပွီး ကမ်ဘာတဈဝှမျး လူပေါငျး (၅၅၀၀) ကို အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးတှေ ဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
Mr Lawson ဟာ ကုမ်ပဏီရဲ့ တိုးတကျမှုကို ဆကျလကျတိုးမွှငျ့ဖို့အတှကျ အမှားအယှငျးတှေ ပျေါပေါကျလာခြိနျမှာ အပွဈမဆိုတဲ့ ခတျေသဈမူဝါဒကို အသုံးပွုပွီး ဖွရှေငျးခဲ့ပါတယျ။ “ဝနျထမျးတိုငျးဟာ အမှားလုပျမိမှာပဲ။ ဝနျထမျးတှေ အမှားမလုပျအောငျ ဘယျအရာကမှ တားဆီးနိုငျစှမျး မရှိဘူး။ ခေါငျးဆောငျတှအေနနေဲ့ အမှားအယှငျးတှေ ဖွဈမလာအောငျ ထိနျးပေးမယျ့ စနဈတှကေို တညျဆောကျဖို့လိုတယျ။ ကုမ်ပဏီတဈခုလုံးကို ပကျြစီးသှားစမေယျ့စနဈကို တညျဆောကျမိတယျဆိုရငျတော့ တညျဆောကျခဲ့တဲ့သူတှကေသာ အပွဈကို ခံယူရမယျ။” လို့ သူက ဆိုပါတယျ။
အမှားလုပ်မိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို အလုပ်ထုတ်ခြင်းမလုပ်ဖို့ အကြံပြုလာတဲ့ Twilio ကုမ္ပဏီ CEO
ကျွန်မတို့ မှာယူထားတဲ့ အစားအသောက်တွေကို လာပို့ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ကြိုတင်ခေါ်ယူထားတဲ့ Uber အငှားယာဉ်က အိမ်ရှေ့ကို ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးနေတဲ့ စာတိုလေးတွေ ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ် တက်လာရင် အတော်လေးကို ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒီပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဖန်တီးပေးနေတာကတော့ ကမ္ဘာကျော် နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး Twilio ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Twilio ကုမ္ပဏီကို၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ကုမ္ပဏီခွဲပေါင်း (၂၄၀,၀၀၀) ထိတောင် ရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Twilio ရဲ့ နှစ်စဉ်ရောင်းအားဟာ ဒေါ်လာ (၂.၅ ဘီလီယံ) အထိရှိတဲ့အပြင် ကုမ္ပဏီရဲ့ အကြီးမားဆုံးသော ဖောက်သည်တွေကတော့ Deliveroo နဲ့ Uber ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ Uber က Twilio ကုမ္ပဏီရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုနှုန်းကို လျှော့ချခဲ့တာကြောင့် ကုမ္ပဏီအခြေအနေဟာ အကျပ်အတည်းတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Mr Lawson ဟာ CEO တစ်ယောက်အနေနဲ့ အဆိုပါအခြေအနေကို ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမှာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ လစ်ဟာမှုတွေကို မြင်သွားခဲ့တာကြောင့် ကုမ္ပဏီရဲ့ အဓိကပြဿနာအတွက် အဖြေထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Mr Lawson က “ဒါဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက် အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါ။ ဒီပြဿနာကို ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ ရှယ်ယာတွေဟာ တစ်နေ့တည်းမှာပဲ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Mr Lawson က Uber ကို Twilio ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ဆက်လက်အသုံးပြုဖို့ ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို အပြစ်တင်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် ဝန်ထမ်းတွေကို အပြစ်မတင်ခင်မှာ ကုမ္ပဏီရဲ့စနစ်ကပဲ မှားယွင်းနေတာလား? ဝန်ထမ်းတွေကပဲ တစ်လွဲတွေလုပ်နေတာလားဆိုတာကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
Mr Lawson က “တကယ့် ပြဿနာအစစ်အမှန်က ကျွန်တော်တို့မှာ အရောင်းဝန်ထမ်း လုံလုံလောက်လောက် မရှိခဲ့တာပဲ။ အချိန်တိုအတွင်းမှာ Uber ကို အသုံးပြုသူတွေ အများအပြား ရှိလာခဲ့တာကြောင့် အရောင်းဝန်ထမ်းတွေက ဝယ်ယူသူတွေကို ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမျိုးပေးဖို့ လုံလောက်တဲ့ အချိန်ပမာဏလည်း မရခဲ့ကြဘူး။” ဆိုပြီး ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို မျှဝေပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ Mr Lawson က “အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့မှာ အရောင်းဝန်ထမ်း အများအပြား ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် Uber နဲ့ ပိုမိုဆက်သွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ပြဿနာတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့မှာပေါ့။ Uber အနေနဲ့လည်း အရည်အချင်း ပြည့်ဝတဲ့ စာရင်းကိုင်မန်နေဂျာတစ်ယောက် ထားသင့်ပါတယ်။” လို့ ဆိုပါတယ်။
Mr Lawson က အရောင်းဝန်ထမ်းတွေကို အလုပ်ထုတ်ပစ်မယ့်အစား ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ မနိုင်ဝန် ထမ်းနေတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် အရောင်းဝန်ထမ်းအသစ်တွေ ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီး Twilio ကုမ္ပဏီဟာ အရင်ကထက် (၅) ဆ ပိုတိုးတက်လာပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း လူပေါင်း (၅၅၀၀) ကို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Mr Lawson ဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့ တိုးတက်မှုကို ဆက်လက်တိုးမြှင့်ဖို့အတွက် အမှားအယွင်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာချိန်မှာ အပြစ်မဆိုတဲ့ ခေတ်သစ်မူဝါဒကို အသုံးပြုပြီး ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။ “ဝန်ထမ်းတိုင်းဟာ အမှားလုပ်မိမှာပဲ။ ဝန်ထမ်းတွေ အမှားမလုပ်အောင် ဘယ်အရာကမှ တားဆီးနိုင်စွမ်း မရှိဘူး။ ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ အမှားအယွင်းတွေ ဖြစ်မလာအောင် ထိန်းပေးမယ့် စနစ်တွေကို တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကို ပျက်စီးသွားစေမယ့်စနစ်ကို တည်ဆောက်မိတယ်ဆိုရင်တော့ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့သူတွေကသာ အပြစ်ကို ခံယူရမယ်။” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
Tags Twilio Uber
Previous Ryan Reynolds ရဲ့ဇာတျကားတှကေိုမကွညျ့ဘူးလို့ အံ့အားသငျ့ဖှယျပွောကွားလိုကျတဲ့ Gerard Butler
Next ၅၂၀ မိုငျအထိ တောကျလြှောကျမောငျးနှငျနိုငျတဲ့ လြှပျစဈကားတှရေဲ့ စှမျးဆောငျမှု။
စာရေးဆရာ Isak Dinesen က “ငနျတဲ့အရသာရှိတဲ့ ခြှေး ၊ မကျြရညျနဲ့ ပငျလယျရတှေဟော အနာပေါငျးမြားစှာကို ကုသနိုငျစှမျးရှိမယျဆိုရငျတော့ တဈကမ်ဘာလုံးကလူတှေ အခုခြိနျမှာအလုပျသငျ့ဆုံးက Scuba Diving …